Miray ara-nofo mandritra ny “regles”
Tsy misy mihitsy ny fandrarana ara-medikaly, raha hiray ara-nofo mandritra ny fotoana hahatongavan’ny fadimbolana.
Fotoana saro-pady anefa io, satria manamora ny fifindran’ny aretina, raha misy izany ilay olona iarahana. Ireto àry ny fepetra tsara raisina, raha hanao izany.
Mahasalama ny fo
Maro ireo manam-pahaizana momba ny fananahana no nilaza fa manatsara ny fahasalaman’ny fo ny firaisana ara-nofo mandritra ny fadimbolana, satria mampitombo ny fitempony ary mampientanentana kokoa. Ireto misy torohevitra mety hanampy hahalafatra io fifampizaràna io:
· Mba tsy handotoana ny fandriana dia asio lamba matroka miloko atao lafika. Amin’izay, tsy mihafihafy sady tsy matahotra ny hanasy ny lamba.
· Mampijanona ny rà ao anatin’ny tranon-jaza ny rano. Noho izany, tsara raha ao anaty efitrano fandroana, na ao anaty dobo filomanosana no miray.
· Tsy voatery hisy fifampitsofohan’ny taovam-pananahana. Azo atao tsara ny manararaotra savarononando.
· Mampiasà kapaoty raha misy fifampitsofohan’ny taovam-pananahana, satria mety ho bevohoka, raha fohy ny tsingerim-bolan’ilay vehivavy no sady hiarovana amin’ny areti-mifindra.
· Aza adinoina mihitsy ny misasa mialoha sy aorian’ny firaisana ara-nofo. Soloy avy hatrany ny servieta ampiasaina rehefa vita ny natao. Ary raha misy rà mandeha, mandritra ny firaisana, dia fafao moramora amin’ny “lingette intime”.